Ikhaya / Blog / Iingcebiso ngokugcina iiBhobho zakho zangasese zingenabala kwaye zivuza simahla
2021 / 09 / 25 uhleloBlog 1796 0
Ipompo yokuhlambela engenabala engenasiphako inokuba yiyo yonke into oyifunayo ukuze uyixabise indawo yakho yokuhombisa. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuqaphela ukuba iifompo zangasese azizukuhlala zicocekile ixesha elide ngaphandle kokuba zinikwa inkathalo efanelekileyo rhoqo. Ingxaki ephambili yokugcina iipompo zangasese, kubandakanya iipompo zokuhlambela, iibhobho zokuhlambela, iipompo zokuhlambela kunye nezinye izinto zokuhlambela, kukuba bathambekele ekuqokeleleni amabala amanzi ngokulula. Oku kunokudala umbono ombi kwimbonakalo yegumbi lakho lokuhlambela.
Ukuba ufuna ukufezekisa inkangeleko engenachaphaza kwindawo yakho yokuhlambela, nazi ke ezinye iingcebiso zeengcali zokugcina iipompo zakho zangasese ngokulula. Nceda uqhubeke.
- Ukuqonda ukuba itompu iyaphela na: Iindlela zokuhombisa izindlu zangasese zitshintshile kakhulu ekuhambeni kwexesha. Zihambile iintsuku apho abantu babedla ngokufaka kuphela iipompo zentsimbi okanye zesinki, iipompo zangasese nezinye izinto zokuhlambela kwiindawo zabo zokuhlambela. Ngala maxesha okuhonjiswa kwendawo yokuhlambela, iipompo zangasese ziyafumaneka kwiindawo ezininzi zokugqiba. Ukusuka kubhedu, ubhedu, iglasi, isinyithi, kunye nezinye iindlela ezinomdla, iimfuno zolondolozo lwetampu ziya kuxhomekeka kakhulu ekugqityweni kwebhokisi yokuhlambela. Ke ngoko, kuya kufuneka uyihlalutye ukuze wazi esona sicocekileyo sokucoca.
- Zama umxube wesepha eyomileyo kunye namanzi ashushu. Ukuba amabala anenkani okanye amabala amanzi aqokelelwe kwiipompo zakho zangasese, unokuzama ukuzicoca ngoncedo lwesepha eyomileyo kunye namanzi ashushu. Hlanganisa ngokufanayo kwaye usebenzise ilaphu elicocekileyo lokususa ukususa la mabala anenkani kunye namabala. Kufuneka usule iyunithi yesinki ngesicoci kwaye emva koko uyomise ngelaphu elingasetyenziswanga ukuyinika ukubonakala okuqaqambileyo.
Sebenzisa iviniga emhlophe ukususa ukungcola: Ukuba itepu yesinki yakho yakha ukungcola ongenakususa, emva koko unokucinga ngokusebenzisa iviniga emhlophe ukuyisusa. Zama ukongeza ikomityi yekomityi yeviniga emhlophe kwenye ikomityi yamanzi ashushu. Emva koko unokuntywila ilaphu lokucoca kuyo ukuze ulahle ukungcola okuneenkani okuqokelelweyo kumbhobho wakho wokuhlambela. Kuyacetyiswa ukuba uzame isahlulo esincinci sesixhobo sokuhlambela ngesi sisombululo ukuqinisekisa ukuba awuwonakalisi umphezulu wesixhobo.
-Isisombululo sokugqibela sesoda kunye nebrashi yamazinyo. Isoda yokubhaka ngumgubo omangalisayo onezicelo kuzo zonke iinkalo zobomi. Esi sithako sekhitshi sinokukunceda ususe amabala anenkani kunye nobumdaka kwizinto zakho zokuhlambela. Into ekufuneka uyenzile kukurabha isahlulo sesoda kwindawo echaphazelekayo ngebrashi yamazinyo emanzi. Oku kuya kusebenza njengokukhuhla kwendalo kwaye kuya kususa onke amabala amabi kwiipompo zakho zangasese.
- Coca rhoqo. Ukuba awufuni ukubila ngemini yokususa amabala kwindawo yakho yokuhlambela, unokuzongela ixesha namandla ngokwenza ukucoca rhoqo izinto zakho zokuhlambela rhoqo. . Unokucwangcisa usuku olunye evekini ukucoca ngokufanelekileyo zonke izinto zakho zokuhlambela.
Iingcebiso zokugcina igumbi lokuhlambela lingavuleki simahla
Ngubani othanda igumbi lokuhlambela elinamanzi apho amanzi ethontsiza kuyo yonke ipompo yangasese, kubandakanya neepompo zangasese, iisinki kunye nezinye izinto zangasese? Ngenxa yobume bamanzi angena ngeyona ndawo incinci, kubalulekile ukugcina igumbi lokuhlambela lingenavuzisi phantsi kwazo zonke iimeko. Ngapha koko, ukongeza kuthintelo lwamanzi ekufumaneni kwindawo yokuhlambela, kufuneka ugcine amanzi ngazo zonke iindleko. Ke ngoko, ukuba ungumntu ophaphileyo, ungathatha la manyathelo alandelayo okwenza igumbi lokuhlambela, kubandakanya itompo yangasese, engavuziyo
-Faka iithayile ze-porcelain. Iithayile zeporcelain zibonakalise ukuba zilunge kakhulu kwiindonga nakwiminyango nanjengoko zingachaphazeki kukuvuza okuqhelekileyo. Oku kungenxa yoxinano oluphezulu lwezinto ze-porcelain. Isakhono seethayile ze-porcelain zokufunxa amanzi sisebenza ngokukuko kangangokuba ezi tile ziye zafumana indlela yazo yoyilo lwangasese kulwakhiwo lwangoku lokuhlambela. Ngaphandle kwezinto ezintle ezibonelelwa zezi tile, iithayile ze-porcelain zikwakhangeleka zinomtsalane ngenxa yomgangatho wazo omenyezelayo kunye nokugqitywa kwe-matte okubenza ukuba banganyangeki ngamanzi. Zomelele kakhulu, zibenza babe lukhetho olufanelekileyo kwiipompo zangasese.
- Sukuvumela naziphi na izikhewu kunxibelelwano ngemibhobho yamanzi. Uninzi lokuhlambela luyilelwe ngemibhobho efihliweyo yePVC. Olu nxibelelaniso lombhobho luthanda ukuvuza. Ke ngoko, la malungu kufuneka atywinwe ngoncedo lweteyiphu engenawo manzi. Kufuneka uqiniseke ukuba akukho zikhewu kumalungu ombhobho. Ukongeza, imibhobho akufuneki ibe nokugoba, kungenjalo, zinokuthi zithambekele ekuvuzeni.
-Nika ithambeka elithambileyo emgangathweni. Obu bubuchule obufanelekileyo bokugcina igumbi lakho lokuhlambela lingenakho nokuthintela nawuphi na umonakalo wamanzi. Xa uyila indawo yakho yokuhlambela, kuya kufuneka ubuze amalungu eqela afanelekileyo ukuba anike ithambeka elithozamisayo kwispout ukuze amanzi ahambe ngokwendalo esiya kwicala elo. Ithambeka elifanelekileyo lendawo yokuhlambela ihlala iphakathi kwe-intshi kunye ne-1/8 ye-intshi ngeenyawo. Ukongeza koku, unokufuna ukuqaphela ukuba neendawo ezininzi zokuhambisa amanzi kwindawo yokuhlambela ukuze amanzi angatshi okanye adibanise.
- Khusela iithayile ngokuncamathela okungangeni manzi. Kumaxesha akutshanje, indlela yesiqhelo yokukhusela iithayile zangasese kunye neepompo zangasese ngesamente kunye nentlabathi zithathelwe indawo kukusetyenziswa kwezinto zokuncamathelisa ezifanelekileyo. Izinto zokuncamathelisa ezikhoyo zilungile ezenziwe ngomgubo owomileyo wesamente oxutywe namanzi ukwenza i-slurry eshinyeneyo. Xa zisetyenziselwa iithayile zangasese kunye neepompo zangasese, zinokwenziwa ukuba zibambane ngokuqinileyo endaweni ixesha elide. Iimpawu zokuqinisa kunye nokuthintela ukungangeni manzi kuthintela nakuphi na ukuvuza kwamanzi okunokwenzeka.
- Khetha ukutyabeka okungangeni manzi. Igumbi lokuhlambela yindawo yendlu evezwe kukufuma okukhulu kunye nokufuma. Ke ngoko, unokukhetha iipeyinti ezingangeni manzi okanye ezinesiqingatha ezihlala zihleli ixesha elide nasemva kokumanzi okuqhubekayo. Ezi peyinti zikwathintela nakuphi na ukuntywiliselwa emanzini kwaye ke ngoko akumanzisi iindonga zangasese.
Ngaba ufuna ukugcina igumbi lokuhlambela livuza-ngaphandle? Unokufunda iingcebiso ezifanelekileyo ezinxulumene nezixhobo zokuhlambela ezinje ngeefompo zangasese ukuqinisekisa ukuba kuyenziwa oku.
Ngaphambili :: Yenza ikhitshi lakho licoceke ngeeMpompo zeKhitshi next: Ukufumana u-plumber kunye neengcebiso ngemibhobho yokunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi